Java Programming Java Programming – Page2– <Myat Min Soe />
Java Programming 4: Arithmetic Operators
Arithmetic Operators Data Type နဲ့ Variable ကိုရင်းနီးသွားပြီဆိုရင် Arithmetic Operators တွေအကြောင်းရှင်းပြပါမယ်။ Class အသစ်တစ်ခုယူပြီး Tutorial3လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါ။ main method ထဲမှာ အောက်ကအတိုင်းရေးလိုက်ပါ။ int i = 3; အပေါ်က code မှာပါတဲ့ = ကို assignment operator လို့ခေါ်ပါတယ်။3ဆိုတဲ့ တန်ဖိုး (value) ကို i ဆိုတဲ့ variable ထဲကို ထည့်(assign) လုပ်လိုက်လို့ပါ။ int i = 3; i =5+ 2; System.out.println(i); run ကြည့်ပါ။7[…]
person Myat Min Soeaccess_time June 6, 2016launch Read More 1
Java Programming 3: Java Data Types & Variables
Java Data Types & Variables Variables ဆိုတာကတော့ memory ပေါ်မှာ တန်ဖိုးတွေမှတ်ဖို့ နေရာယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Java variable တွေမှာ Data Type တွေရှိပါတယ်။ Data Type တွေကတော့ အောက်ကအတိုင်းပါ။ byte – ကိန်းပြည့် (integer) ကို 8 bit နေရာယူပြီးမှတ်ပါတယ်။ – -128 ကနေ 127 အထိမှတ်နိုင်ပါတယ်။ – ကိန်းအရမ်းမကြီးတဲ့ နံပါတ်မျိုးမှတ်တဲ့အခါ int ထက် memory အစားသက်သာလို့ အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ short – ကိန်းပြည့် (integer) ကို 16 bit နေရာယူပြီးမှတ်ပါတယ်။ – -32768 ကနေ 32767 အထိမှတ်နိုင်ပါတယ်။ […]
Java Programming 2: Hello World!
Hello World! Program တစ်ခုစရေးကြည့်ရအောင်။ ပထမဆုံး IntelliJ ကိုဖွင့်ပါ။ – Create New Project ကိုရွေးပါ။ – ဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးက Java ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။ – Project Name ကို Java Tutorials လို့ပေးပါ။ Project Location ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ Folder တစ်ခုဆောက်ပြီး ရွေးပေးလိုက်ပါ။ – ဆောက်ပြီးပြီဆိုရင် ဘယ်ဘက်ဘေးက Project ဆိုတာကို နှိပ်ပါ ကိုယ့် Project နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Folder တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ -src ကို select မှတ်ပြီး right click > new > Package ကိုရွေးပေးပါ။ Package […]
Java Programming 1: Introduction
Java Programming Introduction Java ဆိုတာဘာလဲ Java ဆိုတာ Sun Microsystem ကနေထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ High Level Programming Language တစ်ခုပါ။ 2010 မှာတော့ Oracle က Java ကိုဝယ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Java ရဲ့အားသားချက်တွေကတော့ Platform Independent – Java ကို Java Virtual Machine (JVM) run နိုင်တဲ့ Operating System တိုင်းမှာ Run လို့ရပါတယ်။ (Windows, Mac OS X and Unix) Object Oriented Language – Primitive Data Type တွေပါဝင်တာကလွဲလို့ ကျန်တာအကုန် Object […]
person Myat Min Soeaccess_time June 6, 2016launch Read More 4